Arsenal oo u gudubtay wareegga shanaad ee Koobka FA Cup-ka kaddib markii ay ka adkaatay Bournemouth… + SAWIRRO – Gool FM
(England) 27 Jan 2020. Arsenal ayaa u gudubtay wareegga shanaad ee koobka FA Cup-ka kaddib markii ay 1-2 kaga soo adkaatay kooxda Bournemouth garoonka Vitality Stadium, kulanka wareegga farad ee tartankan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Arsenal.
Daqiiqadii 5-aad kooxda Arsenal ayaa hoggaanka u qabatay dheesha, waxaana 0-1 ka dhigay Bukayo Saka, iyadoo goolkan uu ka caawiyay saaxiibkiis Gabriel Martinelli.
Daqiiqadii 26-aad Arsenal ayaa sii dheereysatay hoggaanka ciyaarta, waxaana ay dhalisay goolkeeda labaad ee ciyaarta, iyadoo uu 0-2 ka dhigay Edward Nketiah, kaddib caawin uu ka helay saaxiibkiis Bukayo Saka.
Qeybta labaad marka dib la isugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican, iyagoo abuuray fursado badan ee goolal loo filan karay.
Dhammaadkii ciyaarta kooxda Bournemouth ayaa hal gool iska soo celisay deyntii lagu lahaa, waxaana u dhaliyey Surridge, inkastoo uusan goolkaasi guuldarro ka badbaadin.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxa ay ku soo dhammaatay 1-2 ay ku adkaatay kooxda Arsenal, waxayna Gunners u soo baxday wareegga shanaad ee koobka FA Cup-ka.